घर फुटबल EXTRAS क्लासिक फुटबलरहरू डेभिड बेखम बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB ले एक फुटबल लीजेन्डको पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ; 'डेभ'। हाम्रो डेविड बेखम बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड लाइब्रेरी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। अब थप adieu, सुरु हुन्छ।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
डेभिड रोबर्ट जोसेफ बेकहम २ मे १21975 मा जन्म भएको थियो Leytonstone, लन्डन, डेभिड एडवर्ड एलन बेकहम (बुबा) र सान्द्रा जर्जिना वेस्ट (आमा) द्वारा। उनको डेभिड रोबर्ट जोसेफ बेकहम नामकरण गरिएको थियो - आफ्नो हजुरबुबाको नाम लिएर।
डेभिड बेकहम परिवारका एक मात्र छोरा थिए। दुई बहिनीहरू बीचको एक बच्चा बच्चा, बेकहम आमा बुबा र भाई बहिनीहरूसँग हुर्केका थिए जो म Englandचेस्टर युनाइटेड, इ England्ल्यान्डको महान फुटबल फ्रान्चाइजीका प्रशंसक थिए। डेभिडले आफ्ना आमाबाबुको म्यानचेस्टर युनाइटेडको मायाको उत्तराधिकार प्राप्त गरे, र उनको मुख्य खेलकुद फुटबल थियो।
जब डेभिड बच्चाको बच्चा थियो, उनका बुवा, टेडले लात लिनको लागि रोल अप अप मोजाबाट बलहरू बनाए। ऊ पहिलो चोटि फुटबल बल लातमा हिर्काउने क्षणबाट नै उनी फिनोम भए। चार वर्षको उमेरमा ऊ हप्ताको केही घण्टा आफ्नो घर नजिकको पार्कमा आफ्नो प्रविधिलाई आदर गर्दै थियो। उसको सपना किक यस बिन्दुबाट सुरु भयो।
एक 2007 साक्षात्कारमा बेकमले भने, "स्कूलमा जब शिक्षकले सोध्यो, 'तिमी ठूलो भएपछि तिमी के गर्न चाहन्छौ?' म भन्छु, 'म फुटबलर बन्न चाहन्छु।' र तिनीहरू चाहन्छन, 'होइन, तपाइँ वास्तवमै के गर्न चाहानुहुन्छ, एउटा कामको लागि?' तर यो म मात्र गर्न चाहन्थें। ”
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -फुटबलमा सुरू गर्नुहोस्
जब दाऊद7थिए, टेड र स्यान्ड्रा (तिनका आमाबाबु) ले आफ्नो छोरालाई मैनचेस्टर युनाइटेड युनिभर्सिटी प्लानमा सौंप दिए।
उनिहरु लाई भेट्न को लागी उनीहरु हरेक हप्ता लगभग २०० माईल सम्म ड्राइभ गर्छन्। डेभिड बेकहम एक सुन्दर युवा किशोरको रूपमा बढ्न पाए र उनीहरूले सोचे भन्दा धेरै हासिल गरे।
सानै उमेरमा, बेकहमले एक फुटबलरको रूपमा आफ्नो वचन देखाए जुन १ 13 वर्ष पुरानो प्रतिष्ठित बबी चार्ल्टन सकर स्कूल राष्ट्रिय कौशल प्रतियोगिता जीत्यो।
उनको प्रतिभाले चाँडै म्यानचेस्टर युनाइटेड टीमका अधिकारीहरूको ध्यान खिचे, जसले उसलाई क्लब युवा लीगको लागि प्रयास गर्न भने। १ 16 वर्षको उमेरमा, Beckham घर छोडेर युनाइटेडको प्रशिक्षण डिभिजनको लागि खेलिरहेको थियो। दुई बर्ष पछि उसले क्लब बनायो, र १ 1995। By मा, उहाँ एक पूर्ण-समय स्टार्टर थिए।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -उहाँको बुबा
उनका बुबा डेभिड एडवर्ड एलन बेकहमलाई 'टेड' भनेर पनि चिनिन्थ्यो उपकरण उपकरण मर्मत गर्ने र भान्छा फिटर थियो। उहाँ आफ्नो बुवासँग नजिक हुनुहुन्छ र उसलाई एक मानिसमा उनलाई हुर्काउन खर्च गरेको उर्जाका लागि उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन प्रेम गर्नुहुन्छ। विशेष बुबाको दिनमा, डेभिड बेकमले भने; "मुबारक बुबाको दिन पिता ... तपाईले मलाई सहयोग गर्नुभएको सबै सहयोगको लागि धन्यवाद ...,"
डेभिड बेकहमका बुबा र उनकी श्रीमती सान्ड्राको बिछोड भयो, त्यसपछि २००२ मा विवाह भएको years 2002 वर्ष पछि उनको सम्बन्धविच्छेद भयो। यो एउटा यस्तो विन्दु हो जहाँ बेखमले आफ्नो बुवाबाट केही टाढा राखेका थिए जसले उसलाई कहिले पनि आफ्नी आमा छोडेर गएको बताएनन्। दुबै डेभिड बेकहम र उनका बहिनीहरू लिन र जोआनले उनलाई ब्रेक-अपको लागि दोष दिए।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पितासँगको मुद्दा
असफलता, यति धेरै वर्ष पछि, उनका बाबुआमाको विवाह बेकहमको म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियल म्याड्रिडको लागि प्रस्थान गर्नु भन्दा पहिले भयो। उनका बुबा 'टेड' बाल्यकालमै म्यान युनाइटेडको पूजा गर्थे। टेडले आफ्नो छोराको स्थानान्तरणको खबर डेभिडबाट नभई आफ्नो एजेन्टबाट पाए। यो उसलाई हिट "एक स्वरवाला जस्तै"। तिनी उत्साहको विरोधमा उभिएका थिए र धोकाको म्यान यूटीका प्रबन्धक सर एलेक्स फर्गुसनलाई आरोप लगाए। गुस्सा र शर्मिंदा, बेखमले आफ्नो बुबालाई रियलको साथ आफ्नो नयाँ अनुबंधमा साइन इन गर्न को लागी निमन्त्रणा गर्न इन्कार गरे। टेड विनाश भयो।
"म थाहा छैन कि म उहाँसँग मेरो सम्बन्धको मरम्मत गर्न सक्छु" टेडले भन्यो। "हामीले बोलेका छौं। मेरो सबैभन्दा ठूलो दु: खी उनको हस्ताक्षरमा निमन्त्रणा गरिएको थिएन। म ठिक छु, वास्तवमा। म त्यहाँ एक दिन देखि भएको छु र त्यो साँच्चै मलाई दुःखलाग्दो छ। म उनको लागि कहिल्यै कहिल्यै क्षमा नदिनेछु। "बुबा र छोराबीचको भावनात्मक दूरी शारीरिक दूरीको आधारमा थियो। "मैले उसलाई हराएको छु - म कसरी महसुस गर्छु," टेडले समयमा भने। "हामीले त्यो साम्राज्य हरायौं जुन हामी बीचको थियो। यो अब म्याद्रिमा गएको छ भन्दा पनि खराब हुनेछ। म अझै पनि काम गर्नु पर्छ र म हरेक हप्ता मैड्रिड मा उडान गर्न सक्दिन। जब उनी म्यानचेस्टर युनाइटेड भए, म कारमा पप गर्न र सडक चलाउन सक्दिन। म त्यो गर्न सक्दिन। मेरो सबैभन्दा ठूलो डर यो हाम्रो लागि भरिएको छ। "
डेभिड बेकहमका बुबा heart। वर्षको उमेरमा हार्ट अट्याकको कारण मरे। उनको एम्बुलेन्समा मृत्यु भयो। उनलाई एउटा धमनी रोक लगाउनको लागि आकस्मिक शल्यक्रियाको लागि अस्पताल लगिएको थियो। त्यस समयमा डेभिड बेकहम उहाँसँगै थिए र आफ्नो मृत्यु हुनु अघि उनीसँग एकताबद्ध भए।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -आमा
मातृभाषा: उनकी आमा, Sandra कपाल स्टाइलिस्ट थियो।
उनी आफ्नो छोराका बच्चाहरूलाई नानी दिन्छन् उनी र उनकी श्रीमती सेलिब्रिटी भ्रमणका लागि।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सेलिब्रेटी सम्बन्ध जीवन
उनको ब्रोडोडो र राम्रो लगत्तै धेरै अफलाइन क्षेत्रको क्षमता पनि प्रदान गरिएको छ। त्यो ठूलो महिलाले प्रशंसकहरूलाई प्रेन्डिस्टिक ओल्ड ट्रेफर्डमा आउन मद्दत पुर्याउन मद्दत गर्दछ। सानो उहाँलाई थाहा थियो कि उनलाई एक मसाला केटीहरु द्वारा प्रशंसा गरिएको थियो।
1997 मा बेकमले डेटिङ सुरु गर्यो विक्टोरिया एडम्स, उनले एक मैनचेस्टर यूनाइटेड म्याचमा भाग लिन पछि। उनी प्रसिद्ध रूपमा जान्छन् "पोश स्पाइस" पप संगीत समूहको स्पाइस गर्ल, एक समयमा संसारको शीर्ष पप समूहहरू मध्ये एक। त्यस समयमा, Beckham सफलताको एक महान रन को लागी आफ्नो टीम को नेतृत्व गर्दै थियो।
१ 1997 XNUMX in मा स्पाइस गर्ल्सको "पोश स्पाइस" भनेर चिनिने भिक्टोरिया एडम्सलाई भेट्दा बेकहम ब्रान्डको मान मात्र बृद्धि भयो। दुईजना छिटो प्रेममा परे। यसैले उनीहरूको सम्बन्धले तत्काल मिडियाको ध्यान आकर्षित गर्‍यो। दम्पतीलाई डब गरिएको थियो “पश र बेक्स"मिडिया द्वारा। उसले २ to जनवरी १ 24 1998 on मा एउटा रेस्टुरेन्टमा उनको प्रस्ताव राख्यो Cheshunt, इङ्गल्याण्ड।
मार्च 4, 1999, सुन्दर विक्टोरिया र कहिल्यै सुन्दर बेकहमले आफ्नो पहिलो बच्चा जन्माए, उनीहरूले ब्रुकलिन यूसुफ नाउँ गरेकी एक छोरा।
दुई महिना पछि, बेकहम र भिक्टोरियाले आयरल्याण्डको डब्लिनको बाहिरी भागमा $००,००० डलरको विवाहमा गाँठो बाँधेर राखे। भूतपूर्व स्पाइस गर्लसँग उसको विवाहले उहाँलाई सेलेब्रिटीको सबैभन्दा गहिराइमा पुर्‍यायो जुन फुटबलरले पहिले कहिल्यै देखेका थिएनन्। उहाँ संसारमा सबैभन्दा मनपर्दो पुरुष चरित्र बन्नुभयो।
जुलाई 2011 मा, उनी र पत्नी विक्टोरिया बेकहम, जुन पहिले नै तीन केटाहरू थिए (ब्रुकलिन, रोमियो र क्रुज), उनी आफ्नो परिवारमा एक छोरी, हार्पर सातको स्वागत गर्छन्।
बेकम परिवार परिवार हो र यसलाई अन्य बुबाको लागि एक भूमिका मोडेलको रूपमा मान्यता दिइएको छ। जूनमा उहाँलाई सेलिब्रेटी बुबाको रूपमा मतदान गरिएको थियो जसले सबै भन्दा बढी मनपर्ने चाहना राख्थ्यो।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -उनको टाटोस
डेभिड बेकमले आफ्नो परिवार भन्दा धेरै बढी हेरचाह गर्न खोजेका छनौट गर्न कठोर थिईन, त्यसैले यो कहिलेकाहीँ अचम्मको अचम्म छैन जब उनी टटूको लागि सुत्न जान्छ भने आफ्नो धूम्रपान गरम पत्नी, छोराछोरी, आमाबाबु, प्रियजनहरू र विश्वासको सम्मान गर्छन्।
उहाँसँग 40 ट्याटोहरू भन्दा बढी छ, प्रत्येकसँग विशेष अर्थ र विशेष डिजाइनहरू छन्।
डेभिड बेकहम उनको आदर्श निकायमा स्याहीको सँधै सङ्ग्रहको संग्रहको लागि चिनिन्छ।
बेकहमले लामो आस्तीन शर्टमा खेलेका थिए भने अरूको विचारमा उनीहरूको टैटूहरू लुकेको छ जसले उनीहरूको विश्वासको कारण असहज हुन सक्छ।
स्कट McTominay बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बेखम कति हो? रानी भन्दा अमीर?
बेकहम परिवार एक पटक आकर्षक मार्केटि। मेसिन बन्छ, र तिनीहरूको सम्पत्ती आश्चर्यजनक व्यक्तित्वहरूमा बढेको छ। ब्रान्ड विज्ञहरूका अनुसार सम्पूर्ण परिवार एक समय अनुमानित आधा अरब पाउन्डको थियो।
डेभिड र भिक्टोरियाको छुट्टै व्यवसाय उद्यमका साथै दम्पती र उनका बच्चाहरू ब्रूकलिन, रोमियो, क्रुज र हार्परको मार्केटिंग अपील सबैलाई ध्यानमा राखिएको थियो। तिनीहरूको अनुमान छ कि परिवार एक पटक £ 470m थियो। यो मूल्य in 30m each प्रति वर्ष m 40m द्वारा वृद्धि भयो।
यसले परिवारलाई रानी भन्दा धनी बनाउँदछ। आइतवार टाइम्स रिच सूचीका अनुसार रानीको अनुमानित भाग्य तिनीहरूको तुलनाको रूपमा £ 340० मिलियन थियो। २०१ 2013 मा, डेभिड बेकहम विश्वको पचास सबैभन्दा धनी फुटबलरको सूचीमा शीर्ष स्थानमा थिए। उनले लिओनेल मेसीलाई ११.175..115.5 मिलियन डलर र सी रोनाल्डोलाई ating १£XNUMX मिलियन डलर कमायो।
उनको सम्पत्तिबाट गणना गरिएको थियो पहिचान योग्य सम्पत्ति, कम्पनी हाउस, गुण, वेतन विवरणहरू, बोनस र अन्य व्यवसायिक हितहरूमा पेश गरिएका वार्षिक खाता सहित। त्यो वर्ष उनको खेलकुदको शरद ऋतुमा राम्रो भए तापनि उनको सबैभन्दा सफल वर्ष थियो।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -धर्म
ऊ एक यहूदी सम्पदाको हो र कुनै समय यहूदी धर्मको अभ्यास गर्थ्यो। बेकहमका मामा बुवा यहूदी थिए, र बेखमले आफैलाई उल्लेख गरेको छ “आधी यहूदी। आफ्नो आत्मकथामा, उनले लेखे ..“सम्भवतः मैले अन्य धर्महरू भन्दा यहूदी धर्मसँग बढी सम्पर्क राखेको छु। म सानै छँदा म परम्परागत यहूदी खोपडी लगाउँथें र हजुरबुबासँगै केही यहूदी विवाहहरूमा पनि जान्थें। ”
त्यसैले यदि उनको दादी एक यहूदी थियो, त्यसपछि उनको आमा सान्रा हो, र यसैले दाऊद हो। यद्यपि अफवाहहरू छन् कि डेभिड बेकहम - किनकि उसको हातमा हिब्रू भाषामा ठूलो ट्याटू थियो - उसले कब्बालाह (अर्को धर्म जुन यहूदी धर्मबाट सुरु भएको थियो) मा परिवर्तन गरेको छ।
उसको हेब्री ट्याटू पुरानो नियमको गीतको गीतबाट आएको छ र हिब्रूमा भन्छः "म मेरो प्रेमीको लागि छु, र मेरो प्रेमी मेरो लागि हुनुहुन्छ, जसले गुलाबजस्तो चरामा भेडा चराउँदछन्।"
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -स्वास्थ्य विकार
Beckham एक अल्मेन्ट पीडित जो बाध्यकारी बाध्यकारी डिसऑर्डर (OCD) भनिन्छ। यो उसले भन्छ कि उसलाई बनाउँछ "सबै कुरा सिधा रेखामा हुन्छ वा सबै चीज जोडीमा हुनुपर्दछ।" विक्टोरिया बेखमले दावी गरे, "यदि तपाइँ हाम्रो फ्रिज खोल्नुहुन्छ, यो सबै दुबै मुनि समन्वय गरिएको छ। हामीले तीन फ्रिजहरू पाएका छौं - एउटामा खाना, अर्कोमा सलाद र तेस्रोमा पेय पदार्थहरू। एक पेय मा, सबै symmetrical छ। यदि त्यहाँ तीन क्यान छन् भने उसले एउटा फालिनेछ किनभने यो एक समान संख्या हुनुपर्दछ। "
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सम्भावित आरोप
पहिलो अगस्त २००२ मा भयो। डेभिड बेकहमले सेलेना लौरीको मिति दिए। लारीले दावी गरे कि उनीसँग उनको 2002 अगस्ट २००२ मा डेनमार्कमा वैवाहिक सम्बन्ध थियो।
अप्रिल 2004 मा, ब्रिटिश ट्याब्लेड विश्वको समाचार बेकमको पूर्व निजी सहायक रेबेका लूस द्वारा दावी बोकेको। जब बेकहम २०० Real मा रियल मैड्रिडमा भर्ना भए, उनी स्पेनमा बसाइँ सरे र आफ्नी पत्नी भिक्टोरिया बेकहमबाट टाढा गए। लूजले बेकमको ब्यवस्थापन टोलीका लागि काम गर्यो र उनको संक्रमणमा मद्दत गरिरहेको थियो।
यस कदम पछि धेरै समय पछि लुसको डेभिडसँग कथित विवाह विवादास्पद सम्बन्ध थियो। एक हप्तापछि, मलेशियनले जन्मेका अस्ट्रेलियन मोडेल सारा मार्बेकले भने कि बेकमले पनि उनको दुई पटकको साथ थप वैवाहिक सम्बन्ध थियो।
बेकहमले दुबै आरोपलाई "हाँसोको" रूपमा खारेज गरे।
सेप्टेम्बर २०१० मा, बेकहमले घोषणा गरे कि उनले वेश्या इरमा निकी र अरु धेरै बिरुद्ध अदालतमा दाबी गरेको थियो "सम्पर्कमा रहनु' कि उनको साथ विवाह संग विवाह भयो।
यद्यपि पत्रिकाले पछि बेकहम विरुद्ध लगाइएको आरोप असत्य हो भनेर स्वीकार गर्‍यो, उनको अदालतको निवेदन अमेरिकाको स्वतन्त्र कानून अन्तर्गत खारेज गरियो। डेभिड र
विक्टोरिया बेकमले उनीहरूलाई इम्मा एनआईसीबाट उनीहरूको बालबालिकालाई दान गर्न पाउने कुनै पनि भुक्तानी दान गर्न आग्रह गरे।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
बेकहमले १ England वर्षको उमेरमा इ England्ल्यान्डको महान फुटबल टीम म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि खेल्न शुरू गरे र २० बर्षमा उनी स्टार्टर थिए।
मैदानमा, Beckham एक हरा याद गरेन। १ 1999 2001। मा, उनले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई प्रिमियर लिगको उपाधि, एफए कप च्याम्पियनशिप, र च्याम्पियन्स लीग उपाधि पुर्‍याए। २००१ मा ग्रीसको बिरूद्ध अन्तिम मिनेट फ्रि किकका लागि इ England्ल्यान्डले २००२ विश्वकपको लागि क्वालिफाइ गर्‍यो। सोही वर्ष, बेकहमले म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग रहनको लागि तीन वर्षको $ २२ मिलियन को सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
तर संयुक्त साथ बेकमको समय कसैको सोचे भन्दा छोटो भयो। २०० 2003 मा, उनलाई म्यानचेस्टरको म्यानेजर, सर एलेक्स फर्ग्युसनसँग बेकहमको बढ्दो बिदाइको कारण हुने रियल मैड्रिडले सौदाको आश्चर्यजनक कार्यमा हासिल गर्‍यो।
उनीहरूको पुरातात्विकताले उनीहरूको टीममा सामेल हुनको लागि स्पेनिश फुटबल फ्यानहरू रोमाञ्चित थिए। अमेरिकियों, बीच में, बस उनको फिलिम को रिलीज संग उसलाई जान्न को लागि, यो बेखम जस्तै झुन्ड्याउनुहोस्, एक रमाइलो चलचित्र जसले एक जवान केटीको कथा बताउँछ जसले आफ्नो परिवारको परम्परागत तरिकालाई बक्स गर्दछ, र अंग्रेजी फुटबलको साथ प्रेममा पर्दछ।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -किन त्यो संयुक्त राष्ट्र छोड्यो
साँचो कुरा भनौं, डेभिड बेकहमलाई म्यानचेस्टरबाट बाहिर पठाइएको थियो किनकी मिडफिल्डर "सोचा कि त्यो भन्दा ठूलो थियो एलेक्स फर्गसन"।
जहाँसम्म उनीहरूको सम्बन्धमा नाटकीय ब्रेकडाउनको सवाल थियो, एलेक्सले दावी गर्यो "मृत्यु knell" डेभिड बेखमले आफ्नो अख्तियारलाई सीधा चुनौती दियो
2003 मा, फर्गुसन संयुक्त खेलाडी डेविड बेखमसँग ड्रेसिङ कोठा तर्कमा संलग्न थिए। उनले बेकहमलाई ओल्ड ट्र्याफर्डमा एक आर्सेनल गोल फिर्ता ट्रैक गर्न असफल भएको आरोप लगाए। फर्ग्युसनले निराश भएर फुटबल बुटमा ढुoned्गा हान्यो, जसले खेलाडीको अनुहारमा हिर्कायो र बेकहममा चोट लाग्यो।
डेभीड बेकहमले केहि गरे। उनले घाँटीलाई फोटो दिन र साक्षात्कार दिन अनुमति दिए। उनको काम देखेर पछि, फर्गुसन उसलाई बेच्न निर्णय गरे। उनले विश्वास गरे कि बेकमले उनी आफू र क्लबभन्दा ठूलो भएको महसुस गरे।
फर्गुसन एक पटक लेखे कि बेखमले उनको अनुहारको चोटले उनलाई एक सेलिब्रेटीमा परिणत गर्यो। उसको अनुसार 'चोटपटक पछि मैदानबाट ख्याति कमाउनको लागि उनीसँग सचेत निर्णय थियो'।
उनी पनि लेख्छन् कि त्यहाँ कुनै थिएन "फुटबलको कारण" बेकिमको लागि लस एंजेल्समा जानुहोस्। 'उनले युनाइटेडका सबैभन्दा चिरस्थायी किंवदन्तीहरू हुने मौका छोडे।' फर्ग्युसन भन्छन्।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -चलचित्रहरूमा उपस्थिति
बेकहम २००२ को फिल्ममा व्यक्तिगत रूपमा देखा परेनन् 'यो बेखम जस्तै, ' संग्रह फुटेज बाहेक। उनी र उनकी श्रीमती क्यामको प्रदर्शन गर्न चाहन्थे, तर समय निर्धारण गाह्रो भयो, त्यसैले निर्देशकले एन्डी हार्मरको सट्टा लुकलिके प्रयोग गरे।
बेकहमले 2005 फिलिममा जेइसेनन ज़िडेन र राउलसँग एक आइओओ उपस्थिति बनाउँछ लक्ष्य!. हर्मर पार्टीको दृश्यमा उनको लागि दोगुना पनि भयो। उत्तरमा आफै बेखम देखा पर्छन् 'लक्ष्य दोस्रो: सपना जीवित ' ठूलो भूमिकामा, जब फिल्मको मुख्य चरित्र रियल म्याड्रिडमा हस्तान्तरण हुन्छ। यस पटक, कथा रियल मैड्रिड टीममा केन्द्रित छ, र बेकहम बाहेक, अन्य वास्तविक जीवन रियल म्याड्रिड खेलाडीहरू पनि काल्पनिक पात्रहरूको साथ, पिचमा र बाहिर देखा पर्दछन्। २०० stock फिफा वर्ल्ड कपबाट स्टक फुटेजको प्रयोग भए पनि, Beckham देखा पर्‍यो लक्ष्य तेस्रो: विश्वमा जाँदै, जुन रिहा गरियो सीधा डीभिडीमा 15 जून 2009 मा। क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसमा गए तापनि, बेखमले अभिनय भूमिकाको पछि लागी कुनै व्यक्तिगत चासो व्यक्त गरेन र उनीहरु पनि धेरै छन् "कडा"
यद्यपि, उनको मित्रताले गर्दा केटा रच्ची, उनले रिचीका फिल्महरूमा दुई क्यामेरो प्रदर्शनहरू गरेका छन्: प्रोजेक्सिस्ट इन इनका रूपमा UNCLE बाट मानिस (उही नामको १ 1964 XNUMX MGMteteTV श्रृंखलामा आधारित), र ट्रिगर को रूप मा राजा आर्थर: तलवार को कथा।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -अमेरिका आउँदैछ
बेकहम र उनको प्रभुत्वको दशकको बारेमा अमेरिकाको आकर्षण २०० 2007 मा अन्त्य भयो, जब फुटबल महान एटलान्टिकको पार गरेर एलए ग्यालेक्सीको साथ पाँच वर्ष, २$० मिलियन डलरको सौदामा हस्ताक्षर गर्न आए। यो स्थान परिवर्तन भिक्टोरिया बेकहमको क्यारियरलाई बढावा दिने बारेमा थियो (उनले अमेरिकामा बसाईएको निर्णयलाई ड्राइभ गर्न मद्दत गर्‍यो) किनकि यो अमेरिकाको मेजर लिग सोकरलाई पाखुरामा गोली हान्न थियो। हस्ताक्षरको hours 250 घण्टा भित्र, ग्यालक्सीले 48००० भन्दा बढी सीजन टिकटहरू बिक्री गर्यो।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -एक रकी अमेरिका
बेकहमको क्यारियर संयुक्त राज्य अमेरिका बसाल पछि, तथापि, एक चट्टानी थियो।
उनी घाइते भएका थिए, एक घुटनीले आफ्नो पहिलो सीजन लामालाई पराजित गर्यो, र पछि एक्स्लेन्स क्यान्सर चोटको कारणले 2010 विश्व कपमा खेल्ने मौका पाएन।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -विविधता
२०१२ मा, बेकहमले एउटा नयाँ व्यावसायिक प्रयासमा लगानी गरेर आफ्नो सफलतालाई बढावा दिए र एच एंड एम कम्पनीको लागि अण्डरवेयर लाइन शुरू गरे।
बेकहमको एच एंड एम मार्केटि campaign अभियानको भागको रूपमा, उनको अन्डरवियरमा फुटबल स्टारको छ वटा १० फुटको मूर्तिहरू न्यू योर्क शहरमा स्थापना भए; अरूहरू लस एन्जलस र स्यान फ्रान्सिस्कोमा स्थापना गरिएका थिए। पछि उनी आफ्नो क्यारियर जारी राख्न PSG मा सरे।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -भावनात्मक सेवानिवृत्ति
मई 16 मा, 2013 - फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट-जर्मर्म-एक 38 वर्षाना बेकहम संग एक खिताब जीत पछि केही दिन पछि घोषणा गरे कि उनको 2013 सीजन को अन्त मा रिटायर हुनेछ, उनको 21 साल को फुटबल क्यारियर को समाप्त भयो।
एक कथनमा उहाँले आफ्नो आँखामा आ आँसुले भन्नुभयो: "मलाई PSI लाई जारी राख्ने मौका दिईएकोमा म आभारी छु तर मलाई लाग्छ अहिले नै उच्च स्तरमा खेल्दै, आफ्नो क्यारियर समाप्त गर्ने सही समय हो।
उहाँले थप गर्नुभयो: “यदि तपाईंले मलाई सानो केटोको रूपमा बताउनुभएको थियो भने म मेरो बाल्यकाल क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडको साथ ट्राफीहरू खेल्थें र गर्वका साथ कप्तान बनेको थियो र मेरो देशको लागि सयौं भन्दा बढी खेल्थ्यो र विश्वका केही ठूला क्लबहरूमा खडा भएको थियो। तपाईं बताएको थियो यो एक कल्पना थियो। म भाग्यशाली छु ती सपनाहरु लाई साकार गर्न। "
उसको सेवानिवृत्तिले अन्य कुनै भन्दा फरक क्यारियरको अन्त्य ल्याउँदछ। 384बर्षे English वटा देशहरुमा लिग खिताब जित्ने पहिलो अंग्रेजी मानिस बन्नुभयो। थाट्स म्यानचेस्टर युनाइटेड (इ England्ग्ल्यान्ड), रियल म्याड्रिड (स्पेन), ला ग्यालेक्सी (युएस) र पीएसजी (फ्रान्स)। युनाइटेडमा उसको समय सब भन्दा स्मरणीय थियो, त्यहाँ उसले छवटा प्रिमियर लिग खिताब, दुई एफए कप र च्याम्पियन्स लिग जित्यो।
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सेवानिवृत्ति पछि ठूलो कुरा गर्दै
हामी सबैलाई थाहा छ, पूर्व इ England्ल्यान्डका कप्तान डेभिड बेकहम २०१ 2013 मा प्रोफेशनल फुटबलबाट सेवानिवृत्त भए, तर के तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ कि उनको सेवानिवृत्ति केवल एक ठूलो परियोजनामा ​​लिनको लागि थियो।
फेब्रुअरी,, २०१5मा एक प्रेस सम्मेलन मा, Beckham मियामी मा एक नयाँ MLS टीम को लागी आफ्नो योजनाहरु घोषणा, र यो आशा को कुनै दूर समय मा सम्पन्न हुनेछ।
सायद, कथा "एक पटक फुटबल खेलाडी, सँधै फुटबल खेलाडी"? निश्चित रूपमा डेभिड बेकहमको कथा एकदमै मिल्छ। यद्यपि हाल रिटायर्ड हो, तर थकित छैन। उसले सबैलाई प्रमाणित गर्यो कि उसको फुटबल क्यारियर PSG मा समाप्त भएन।
बेकहम ले एक मालिक को लागी एक फुटबल क्लब मा खेल्न देखि एक कदम फिर्ता लेने को निर्णय लिया छ। उहाँसँग साँच्चै राम्रो काम छ उहाँका लागि काम गर्दै। यो अफवाह भएको छ कि उनको टोलीको नाम हुनेछ "मियामी बेखम संयुक्त", र त्यो त्यो मियामी विश्वविद्यालय संग सम्बद्ध गरिनेछ। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। एक पटक अचम्मको फुटबल खेलाडीले आफ्नै फुटबल टोली बनाउँछ र यसको लागि ब्रान्ड नयाँ स्टेडियम निर्माण गर्दछ। तपाईं जानुहुन्छ!
डेभिड बेकहम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -उनका छोराको फुटबल न खेल्ने निर्णयले टुक्रियो
बेकहमले एबीसी न्यूजलाई भने कि उनी आफ्ना बच्चाहरुको उमेरमा पेशेवर फुटबल खेल्न मन पराउँछन्, तर केवल यसले खुशी पायो भने।
"अर्को दिन मेरो एक जना केटाले मतिर फर्किए र भने, 'ड्याडी, तपाईंलाई थाहा छ, म जहिले पनि फुटबल खेल्न चाहन्छु भनेर निश्चित छैन ...' यसले मेरो अनुहारमा अलिकता भाँच्यो," बेखमले भन्यो।
उनले भने कि उनको छोराले यसो भने: "जहिले पनि म मैदानमा जान्छु, मलाई थाहा छ लोग्नेमान्छे, 'यो डेभिड बेकहमको छोरो हो', र यदि म तपाईं जस्तो असल छैन भने, यो त्यति राम्रो छैन।”
"उसले भन्यो, 'ठीक छ, त्यहाँ रोक्नुहोस् ... तपाईं खेल्नुहोस् किनकि तपाईं खेल्न चाहनुहुन्छ,'